China OEM Professional High Density Roger pcb vagadziri uye bhizimisi | Fastline
Mukusarudza Mesh Nebulizer Manaufacturer
Double germinales Fr4 pcb Board marongerwo
Multilayer Fr4 pcb mmsik Printer
Single rukoko Fr4 pcb Board Manufacturing
Radio Quick Hazvichinji-chinji Flex pcb
Small pcb azoshandiswa High Quality azoshandiswa Hazvichinji-chinji ...
Quick Hazvichinji-chinji Flex pcb Business
0.2mm Hole pcb yakavhenganiswa Compression Hazvichinji-chinji -Flexible pcb ...
Gold ra Rogers pcb azoshandiswa Price
0.15mm Hole pcb Hazvichinji-chinji -Flexible pcb Board kuti Hobbyist
0.15mm Hole pcb Standard Hazvichinji-chinji-Zvichienderana pcb Board
High Density Quick Hazvichinji-chinji Flex pcb
0.1mm Hole Hazvichinji-chinji-Zvichienderana pcb Board Gerber bhodhi
0.1mm Hole Hazvichinji-chinji -Flexible pcb Board kuti Keypad
Custom High Density Rogers pcb nematunhu Board
Resin Plug Hole Rogers Double vanototsigira pcb nematunhu Board
Rogers 4350B pcb bhodhi germinales: 2L ukobvu: 1.6mm Material: Rogers 4350B, ER = 3.5 Min njanji upamhi: 0.12mm Min njanji nzvimbo: 0.12mm Min buri: 0.2mm cú: 1OZ / 1 oz Soldermask: Green Silkscreen: White Surface kumugumo: ENIG Application: Telecom Tiri tichifunga pcb uye PCBA indasitiri kwemakore anopfuura 10, uye kazhinji kushumira kumisika European uye American , uyewo kuchamhembe uye South America uye misika kuSoutheast Asia. Tinotarisira kukubatsira kubudisa yemakwikwi unhu zvigadzirwa vari pamusika yenyu.
1.Introduction pamusoro OEM Professional High Density Roger pcb
Fastline matunhu anokwanisa kupa zvizere turnkey uye haasaruri turnkey akadhindwa redunhu bhodhi gungano mabasa. For zvizere turnkey, isu kutarisira yose muitiro, kusanganisira kugadzirira Printed Circuit Boards, zvokuvakisa yenhengo, online kurongeka Tracking, chichiitwa richiona rakanaka uye yokupedzisira neungano. Asi nokuti rushoma turnkey, mutengi anogona kupa PCBs uye vamwe zvinoriumba uye zvikamu asara richaitwa sei nesu.
Features-Our Products Chazvakanakira
Makore 1. Over 10 ruzivo mugadziri mu pcb Unganai uye pcb munda.
2. Big kwakaita kubudisa anosimbisira kuti yako kutenga mutengo dererei.
3. Advanced dzaFord anovimbisa akatsiga unhu uye upenyu hurefu span.
4. berekai chero pcb sezvo zvinodiwa wako.
5. 100% muedzo zvose customized pcb zvigadzirwa.
6. Mumwe-vanorega Service, tinogona kubatsira kuti kutenga zvinoriumba.
Pcb kumumvuri Lead Time:
Cherechedza: Base pamusoro mashoko ose akagamuchira nesu uye anofanira kuva wakakwana uye dambudziko wakasununguka, Lead nguva akagadzirira anotakura.
Tinotenda kuti unhu ndiwo mweya ane zvebhizimisi uye inopa nguva-yakaoma, yemazuva ano yemhando engineering kugadzira mabasa nokuda Electronics indasitiri.
Sound unhu anofarirwa mukurumbira wakanaka Fastline. Vakavimbika vatengi akaita pamwe nesu zvakare uye zvakare uye vatengi itsva vanouya Fastline kumisa pamwe ukama pavanonzwa kuti mukurumbira zvikuru. Tinotarisira kupa yepamusoro basa kwamuri!
2.Production Details of OEM Professional High Density Roger pcb
3. Kushandiswa O d OEM Professional High Density Roger pcb
Kwatave yepamusoro PCBA kuti nyika dzakawanda, kubva nevatengi zvemagetsi kuti foni, itsva simba, Aerospace, Automotive, etc.
4. Qualification pamusoro OEM Professional High Density Roger pcb
Takaita akatara vakaparadzana dhipatimendi apo oga kugadzirwa akaronga vachatevera yenyu kuitira kurimwa pashure mubayiro wako, kusangana wako pcb kugadzirwa uye gungano chinodiwa.
Tine pazasi zvinodiwa kuratidza pcba yedu.
Tinoshandisa Vacuum uye atorwa kuti putira zvinhu, kuitira vose vanogona kusvika kwamuri zvachose.
7.Deliver Zvino Kushumira
Unogona kusarudza chero achitaura kambani kuti nhoroondo yako, kana nhoroondo yedu, nokuti kurema pasuru, seaway kutumirwa achava kuwanikwa, zvakare.
Kana iwe kuwana pcba, musakanganwa kuongorora uye kuedza kwavari,
Kana dambudziko, anobvumirwa nesu!
Q1: Uri fekitari kana kutengesa kambani?
A1: Tine zvedu pcb kugadzira & fekitari Assembly.
Q2: Chii rako Odha uwandu?
A2: Our MOQ harisi chete kwakavakirwa zvinhu zvakasiyana. Zvinorayirwa Small zvakare kugamuchirwa.
Q3: chii faira tinofanira kupa?
A3: pcb: Gerber faira zviri nani, (Protel, simba pcb, Mapedhi ikwidzwe), PCBA: Gerber faira uye BOM pasi.
Q4: No pcb faira / GBR faira, chete vane pcb yokuenzanisira, unogona kubereka ini?
A4: Hongu, tinogona kukubatsira clone yacho pcb. Just kutumira mharidzo pcb kwatiri, tinogona clone ari pcb magadzirirwo uye kushanda kunze izvozvo.
Q5: Chii chimwe mashoko anofanira kuuyiswa kunze faira?
A5: Pashure nokurondedzerwa zvinodiwa kuti mashoko:
a) Base zvinhu
b) Board ukobvu:
c) Copper ukobvu
d) Surface kurapwa:
e) ruvara solder Mask uye silkscreen
Q6: Ini ndiri chaizvo kugutsikana pashure ndaverenga mashoko enyu, ndingabatsira kutanga kutenga murayiro wangu?
A6: Tapota taura rokutengesa edu panguva Homepage online, ndatenda!
Q7: Chii kudzikinurwa mashoko uye nguva?
A7: Hatiwanzodi kushandisa FOB mashoko uye anotakura nhumbi muna 7-15 workdays zvichienderana yenyu kuitira uwandu, customization.
Omarara pcb 0.1mm
Omarara pcb 0.2mm
High Speed ​​Press Hole Rogers pcb
Rogers pcb matunhu Board Reverse Engineering W ...
Resin Plug Hole Rogers Multilayer pcb nematunhu ...
Simple Rogers pcb nematunhu Board Reverse Engine ...
Resin Plug Hole Rogers Single vanototsigira pcb Circuit ...
Phones: +86 755 2332 9221
Address: 509 ZhongYang Building, No.24 FuHai Road, FuYong, Báo An, Shenzhen, Guangdong, China 518103
© Copyright - 2010-2017 : All Rights Reserved. Featured Products ,Sitemap ,Mobile Site
Press Hole Rogers pcb, Rogers pcb, Vanachandagwinyira-Flex pcb Board, Fr4 Flex pcb, Omarara Flex pcb, Vanachandagwinyira-Zvichienderana pcb,